Top 10 Ebe Nzuzo Na Worldwa | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 10 Ebe Nzuzo Na Worldwa
(Emelitere ikpeazụ On: 26/05/2021)
Ọdọ n'okpuru mmiri, mmiri mmiri zoro ezo, uzo-aka-uzọ quaint obodo nta, na echiche mara mma, ụwa juputara na ebe nzuzo dị ịtụnanya. Ndị a n'elu 10 ebe nzuzo dị n'ime ụwa niile nwere ike ịnweta ndị njem mana a na-elegharakarị ha anya. Ya mere, kwadebe maka njem na-akụda mmụọ gaa ebe zoro ezo na ebe dị egwu n'ụwa.
1. Ebe Nzuzo Dị Elu na Germany: Berchtesgaden
250 km nke hiking ụzọ ụkwụ, pristine turquoise ọdọ mmiri, na ọmarịcha ọnụ, Berchtesgaden National Park bụ otu n'ime ebe nzuzo kachasị dị na Germany.
Ogige a dị n'akụkụ ala Germany na ókèala Austria na ọ bụ ebe obibi mara mma mara mma na Bavaria. Ezie na ọtụtụ ndị njem nleta na Black Forest, Swiss Alps, ma ọ bụ etiti Europe, a na-eleghara ogige ntụrụndụ mba a dị ịtụnanya anya. Ya mere, ị nwere ike ịbụ otu n'ime ndị njem ole na ole, nwee picnic site Ọdọ Konigssee, gbalịa elu ugwu ka Watzmann - na 2,713 mita maka breathtaking echiche nke ndagwurugwu, na agwa ohia emetughi.
Salzburg na Berchtesgaden Na A Train
Munich na Berchtesgaden Na A Train
Linz na ụgbọ oloko na Berchtesgaden
Innsbruck na Berchtesgaden Na ụgbọ oloko
2. Ebe Kasị Nzuzo Na Italytali: Ebe obibi ndị mọnk nke Santa Maria Dell Isola Na Tropea
Imirikiti ndị njem nleta na-asọ mmiri na osimiri ọla edo Tropea amaghị ebe nzuzo a. Otú ọ dị, n'aka nri ha, nọdu n’elu elu ugwu, gbara Oké Osimiri Tyrrhenian gbara gburugburu, bụ Ebe Nsọ nke Santa Maria dell Isola.
O doro anya ma ọ bụrụ na ndị Benedictines ma ọ bụ ndị Basilia wuru ebe obibi ndị mọnk oge ụfọdụ na Middle Ages. Ya mere, ị nwere ike ịchọpụta akụkọ ihe mere eme na ịma mma n’azụ ụlọ ndị mọnk rụzigharịrị. Obi abụọ adịghị ya, ebe obibi ndị mọnk lanarịrị 2 ala ọma jijiji, n'ezie na-edebe ụfọdụ n'ime ihe nzuzo kachasị mma ma na-atọ ụtọ nke Calabria.
Vibo Marina na ụgbọ oloko na Tropea
Catanzaro gaa Tropea na ụgbọ oloko
Cosenza na Tropea na ụgbọ oloko
Lamezia Terme na Agbọ okporo ígwè na Tropea
3. Ebe Kasị Nzuzo Na Switzerland: Trummelbach Falls
Na ndagwurugwu nke 72 nsụda mmiri, ị ga-eche na enweghị mkpughe nsụda mmiri na Switzerland, mana enwere. Otu n'ime ebe nzuzo kachasị na Europe bụ Trummelbach Falls. Nke a dịgasị iche iche nke 10 glacier-nri mmiri mmiri na Switzerland, a na-enye ya site na mmiri agbaze site na Eiger na Jungfrau.
Ya mere, mgbe ị na-eleta ma na-agagharị n'ugwu ahụ, na-enwe mmasị na nsụda mmiri nzuzo ndị a, Yiri uwe ga-echebe gị pụọ na mmiri mmiri na-agbaze mmiri.
4. Seegrotte Na Hinterbruhl, Austria
A njem ụgbọ mmiri n’otu ọdọ mmiri dị n’okpuru n’Austria bụ nnukwu ahụmahụ a na-agaghị echefu echefu. Nnukwu nnukwu ịhụ Grotte na obodo Hinterbruhl, bụ usoro ọgba, na mbụ mmadụ mere maka igwu ala, na WWII.
Otú ọ dị, A gbahapụrụ ọdọ mmiri dị n'okpuru ala n'oge ahụ. taa, ndị Seegrotte na Hinterbruhl, ghọọ otu n'ime n'elu 10 ebe nzuzo ị ga-aga n’ụwa.
5. Ebe Nzuzo Dị Elu Na China: Ugwu Sanqing
3 breathtaking elu ugwu elu n'ígwé ojii, Ugwu Sanqing bu otu ihe kachasi nma na omenala China. Echiche nke ugwu Sanqing abụghị naanị otu n'ime echiche ndị kachasị mma na mpaghara China, kamakwa nwere nkọwa dị nsọ na nkwenye Taoist; na 3 nzukọ na-anọchi anya ndị 3 Ndị Dị Ọcha, chi kachasi elu.
Mpaghara gburugburu Sanqing na-enyekwa echiche dị ịtụnanya, ụzọ ụkwụ, na isi anwansi iji chọpụta site na 10 ọtụtụ ebe mara mma na mpaghara ahụ. Ya mere, debe onwe gị njem ụbọchị 2 iji gbagoo Sanqing, ya mere ị nwere ike ịnụ ụtọ zuru oke na ịchọpụta ebe niile zoro ezo.
6. Top Secret Ebe ke Italy: Trentino
Mma nke Italian Alps abughi nke uwa zoro ezo kachasi nma. Onye ọ bụla maara banyere ugwu, odida obodo, ọdọ mmiri alpine, na ala ahịhịa juru. Otú ọ dị, Trentino na North-East nke .tali, n'etiti ọdọ Garda na Dolomites, na-agbaghara na ụzọ eke ebube kwuru ebe a. Ebe ị ga-ahụ ọnụ ọgụgụ pụtara ìhè nke 297 Ọdọ mmiri ịchọpụta.
Na mgbakwunye, naanị ebe a ị nwere ike ịmasị mmetụta ọkụ pụrụ iche "alpenglow" na ọnụ ọgụgụ ndị Dolomites, mgbe anyanwụ dasịrị.
7. Ebe Nzuzo Dị Elu na Poland: Oke Osisi gbagọrọ agbagọ na Szczecin
Kụrụ na 30s, Ọhịa Szczecin bụ otu n'ime ebe nzuzo nzuzo ụwa. Nke a bụ n'ihi ihe kpatara oke ọhịa ahụ ji apụ na Poland, nso obodo Gryfino. site 400 osisi pine kụrụ azụ na 30, taa ị ga-ahụ na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole fọdụrụ, ka na-eme ebe a kpam kpam kwesịrị nleta.
Ihe kpatara ọdịdị pụrụ iche bụ ihe omimi ruo taa; ọtụtụ anwaala ịchọpụta ma ọ bụ mmadụ ka ọ bụ ọmarịcha okike. Ya mere, ọ bụrụ n’ikpebie ịga leta, ị nwere ike inyocha ihe nzuzo nke fir pine’ pine pụrụ iche udi, ma chọpụta otu n'ime ihe ndị kasị mma ọhịa na Europe.
8. Ebe Nzuzo di elu na Hungary: Tapolca
Tapolca bụ obere obodo mara mma na Hungary, emi odude ekpere Baltan Uplands ihe ndozi. Ọtụtụ ndị njem na-aga Hungary maka ezumike na Budapest, mana obodo Tapolca bu ihe nzuzo zoro ezo nke Hungary. Na mgbakwunye na idi nso ya na nnukwu ogige mba, obodo a nwere ọdọ n’etiti, na a mara mma square na cafes gburugburu.
N'ihi ya, ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ ụtọ nri Hungary, na-enwe mmasị ma chọpụta ọdịdị dị ịtụnanya nke Hungary, na ọdọ, wee deba tiketi gị na Tapolca.
9. Ebe Nzuzo Dị Elu Na England: Hunstanton, Norfolk
Mgbe ị gara na obodo ezumike nke Hunstanton na Norfolk, ọ ga-adị ka obodo ezumike dị jụụ n’akụkụ oke osimiri. Otú ọ dị, mgbe ị gbadata n'ụsọ oké osimiri na pebbled osimiri, ị ga-ahụ ọnụ ọnụ ugwu ndị kachasị mma. Old Hunstanton ọnụ ọnụ ugwu bụ n'ígwé nke yi sandstone; nke na-ata nchara, Okwute nzu na-acha uhie uhie nke jupụtara na nzu, gbara gburugburu na ahihia ahihia na-acha anụnụ anụnụ.
Ya mere, osimiri mara mma nke Hunstanton mara ezigbo mma, karịsịa mgbe anyanwụ dara. N'oge nke ụbọchị, ọnụ ọnụ ugwu ugwu gbanwere agba, na ọdịiche dị n’etiti oké osimiri na ọnụ ọnụ ugwu ahụ bụ ihe pụrụ iche. N'agbanyeghị mma ya, ọtụtụ amabeghị ebe nzuzo a dị na East England. Ya mere, ị ka mma ọsọ ọsọ ka akwụkwọ gị ụgbọ okporo ígwè tiketi ka osimiri nke Hunstanton, tupu ụwa niile achọpụta.
10. Applecross Peninsula Na Scotland
Ejiri okporo ụzọ dị n'okporo ụzọ a mee ka ndị Scottish a dị ịtụnanya 1975, ya na okporo ụzọ na-asọda ma dị larịị nke na-agafe na peninsula n'akụkụ osimiri. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ileta nke a dịpụrụ adịpụ mkpuru, ị ghaghị ịdabere na njem ụgbọ mmiri naanị, dị ka ndị ọzọ bi n'àgwàetiti a.
Applecross bụ obere obodo mara mma nke dị n'ụsọ mmiri nke Scotland. Obere ụlọ na ụlọ na-agbasa n'ugwu ahịhịa ndụ jupụtara, na-ele oké osimiri anya, ga-ewepu ume gi.
Na naanị 544 bi, e nwere nnọọ ole na ole ihe mere njem ka Applecross, ma ihe doro anya na ọmarịcha echiche, kpam kpam irite ya a ntụpọ dị ka otu n'ime n'elu 10 ebe nzuzo n ’ụwa. Na mgbakwunye, Camusterrach na Ard-dhubh bụ ụlọ ọrụ abụọ ọzọ ka ịghara ịhapụ ịgagharị na nyocha gị, dị ka ha na-na-sonso metụrụ modernization.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịme atụmatụ njem a na-agaghị echefu echefu gaa n'elu 10 ọtụtụ ebe nzuzo na ụwa ụgbọ okporo ígwè.
You chọrọ Embed anyị blog post “Top 10 Ebe Nzuzo Na ”wa ”na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fsecret-places-world%2F – (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Nzuzo zoro ezo Ihe ezoro ezo nzuzo Nzuzo TopSecretplacesinEurope